Haweenay isku dishey Guriceel oo aad looga argagaxay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Haweenay isku dishey Guriceel oo aad looga argagaxay
Wararka naga soo gaaraya degmada Guriceel ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in xalay haweenay ay isku dishey halkaasi. Dadka degmada ayaa aad u naxay wararka haweenayda isku dishey. Haweenayda oo aan sidaa u weynayn ayaa la sheegay inay Ka masayrtey ninkeeda oo xaaskale la guursaday.
Ehelada gabadha ayaa sheegay in markii lala guursaday uu ku yimi isku buuq iyo Isla hadal kadibna ay sun cabtey sidaana ku geeriyootay. Dilka haweenayda ayaa aad looga hadal hayaa magaalada.
Diinteena ma qabto inaa is disho ama is qarxiso, weyna ka hadashay cawaaqib xumada qofka is dila and is qarxiya. Si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay ee haweenay isku disho markii lala guursado.
Waxaan haweenka kula talin lahaa inay samraan oo ay ayna naftooda galaafan waayo cawaaqib xumada ay leedahay dunida saxda ayaa ka xun markaad RABIGAA hortagto ayuu yiri Cali Calasow waayo jawaab ma haysid marka lagu weydiiyo maxaa isku dishey.